ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ NLD ၀င်လိုက်တာ အစိုးရနဲ့ NLD ဘယ်သူ အမြတ် ပိုထွက်သလဲ” ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ပြောကြားချက် (အသံ)
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ဧပြီ ၁ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ NLD ၀င်လိုက်တာ အစိုးရနဲ့ NLD ဘယ်သူ အမြတ် ပိုထွက်သလဲ” ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ပြောကြားချက် (အသံ)
“မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှုအပေါ် ရန်ကုန်လူထုအမြင်” (အသံ)
Yes, he tell the truth.
ဦးဝင်းတင်ဟာ တချိန်ကရဲရဲတောက် သတင်းစာဆရာကြီးပါ၊ သူ့ခေတ်နဲ့ သူ့အခါ၊ သူငယ်ရွယ်စဉ်ကတော့ သူအတွေးအခေါ်၊ အမြှော်အမြင်တွေက မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူလဲအရွယ်ရလာပါပြီ၊ အနားယူသင့်ပါပြီ၊ သူ့အယူအဆ၊ သူ့အတွေးအခေါ်တွေက အခုခေတ်နဲ့ မကိုက်ညီတော့ပါဘူး၊ ခေတ်နောက်ကျနေပါပြီ၊ လူငယ်၊ လူရွယ်တွေ လက်ဆင့်ကမ်းထမ်းဆောင်ရမယ့် အချိန်အခါ ရောက်နေပါပြီ။
နှစ်ဘက်စလုံး က ကိုယ်.တွက်ကိန်းနဲ. ကိုယ် ဟုတ်နေကြတာ ၊
၂၀၁၅ မှာ ပြည်သူတွေလက်ထဲ နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာ
အာဏာ ရလာရင်တော. ဟုတ်တာပေါ. ၊ ဒါကလည်းဖြစ်နိုင် ခြေ ၅ % လောက်ပါ၊
NLD အပါအ၀င် ပါတီတွေ ၊ ပြည်သူတွေကတော.
ဆင်. --- ဟိုဒင်း .... ခွေးမျှော် ၊ စစ်တပ် ယန္တရား ကြီး
ကလည်း --- ခွေး ၀မ်းသာအောင် ..... အီး နံ. ပေး ---
နဲ. ၊ ရင်နာစရာပါ ။ လက်ရှိမှာတော. တိုင်းပြည်ဟာ
စစ်တပ်ရဲ. လက်ခုပ်ထဲကရေ အဆင်.ဘဲ ဆိုတာ
လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာက သက်သေ ပါ ။
အဘရယ်တော်ကြပါတော့ မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်လို့ အဟုတ်မှတ်ပြီးကကြ
တာ အသုံးချခံပြည်သူနဲ့ အသုံးချခံ ဝန်ထမ်းပဲ ဘဝတွေပျက်ကုန်တာ။
ဟိုအသင်းကြီးတုန်းကလဲ တောထဲတောင်ထဲ အတူသွား အတူစားနဲ့
ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ ခံပြီး လုပ်ပေးရတယ် မင်းသားတွေ အားလုံး ကုလားထိုင်
ကိုယ်စီရရော ဘဝတွေ မေ့နေကြပြီ ရပါလိမ့်မယ် ၂၀၁၅ မှာ စောင့်ကြည့်
ကြားပြတ်က အဖြေပဲ။ ဝန်ထမ်းတွေ နေတဲ့ ရပ်ကွက်တောင် မနိုင်တာ
ဟို ပါတီကလဲ ထောင်ကျတာကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ သူရဘွဲ့ ရတယ်လို့ များထင်နေ
သလားမသိဘူး အနူတောမှာ လူချောဖြစ်နေတာကိုဂုဏ်ယူနေတယ်။